Impilo Engcono: Yidla Ngokuhlakanipha
Isinyathelo 1—Yidla Ngokuhlakanipha
“Yidla ukudla. Hhayi okuningi kakhulu. Yidla kakhulu imifino.” Ngala mazwi ambalwa, umlobi uMichael Pollan ufingqa iseluleko esilula nosekuyisikhathi sisebenza esiphathelene nokudla. Usho ukuthini?
Yidla ukudla okunomsoco. Gxila ekudleni ukudla “kwangempela,” okuphelele nokunomsoco osekuyizinkulungwane zeminyaka abantu bephila ngakho, hhayi ukudla kwesimanje okufakwe izinto zokukulondoloza. Ukudla okulungiselelwe abezentengiselwano nalokho okuphekwa ngokushesha ezitolo zokudlela kuvame ukuba noshukela omningi, usawoti namafutha, okuyizinto ezihlobene nesifo senhliziyo, unhlangothi, umdlavuza nezinye izifo eziyingozi. Uma upheka, zama ukupheka ngaphandle kwamafutha, ukupheka ngohhavini nokosa esikhundleni sokuthosa. Zama ukusebenzisa izinongo nezithako kakhudlwana ukuze unciphise usawoti. Qiniseka ukuthi inyama ivuthwa kahle futhi ungalokothi udle ukudla osekonakele.
Ungadli kakhulu. I-World Health Organization ibika ngokwanda okuyingozi emhlabeni kabanzi kwabantu abakhuluphele, okuvame ukubangelwa ukudla kakhulu. Olunye ucwaningo lwembula ukuthi kwezinye izingxenye ze-Afrika, “kunezingane eziningi ezikhuluphele kunalezo ezingondlekile kahle.” Izingane ezikhuluphele zisengozini yokuba nezinkinga zempilo kuhlanganise isifo sikashukela, kungaba manje nasesikhathini esizayo. Bazali, bekelani izingane zenu isibonelo esihle ngokulinganisela ekudleni.
Yidla kakhulu imifino. Ukudla okukahle yilokho okunezithelo ezihlukahlukene, imifino kanye nokusanhlamvu kunokuba kube inyama nezinto ezinjengamazambane nempuphu. Zama ukudla inhlanzi esikhundleni senyama kanye noma kabili ngesonto. Nciphisa ekudleni okucolekile njenge-pasta, isinkwa esimhlophe nelayisi elimhlophe okuyizinto ezingenawo umsoco. Kodwa kugweme ukudla okuthandwayo kube kuyingozi. Bazali, vikelani izingane zenu ngokuzisiza zihlakulele uthando lokudla okunempilo. Ngokwesibonelo, zinikeni amantongomane nezithelo ezihlanzeke kahle nemifino lapho zifuna ukudla okulula kunokuba nizinike amazambane athosiwe asemaphaketheni noma uswidi.
Phuza amanzi amaningi. Abadala nabancane kudingeka baphuze amanzi amaningi kanye nezinye iziphuzo ezingenashukela zonke izinsuku. Phuza uketshezi ngokwengeziwe uma ilanga lishisa noma wenza umsebenzi okhandlayo nalapho uvivinya umzimba. Iziphuzo ezinjalo zisiza ekugayekeni kokudla, zikhiphe ukungcola emzimbeni, isikhumba sichachambe futhi zilwe nokukhuluphala. Zikusiza ukuba uzizwe ukahle futhi ubukeke nakahle. Gwema ukuphuza kakhulu utshwala neziphuzo ezinoshukela. Ukuphuza ikopi elilodwa lesiphuzo esinoshukela ngosuku kungaholela ekutheni isisindo sakho senyuke ngamakhilogremu angu-7 ngonyaka.
Kwamanye amazwe ukuthola amanzi ahlanzekile kungaba umsebenzi onzima futhi kuyabiza. Noma kunjalo, ukuphuza kubalulekile. Amanzi angahlanzekile kudingeka abiliswe noma afakwe imithi yokuwahlanza. Kuthiwa abulala abantu abaningi kunababulawa izimpi noma ukuzamazama komhlaba; kubikwa ukuthi amanzi angahlanzekile abulala izingane ezingu-4 000 ngosuku. I-World Health Organization itusa ukuba izinsana zinceliswe ubisi lwebele ezinyangeni zokuqala eziyisithupha, ngemva kwalokho kube ubisi lwebele nolunye uhlobo lokudla kuze kube yilapho okungenani umntwana eseneminyaka emibili.
Thumelela Thumelela Isinyathelo 1—Yidla Ngokuhlakanipha
Izinyathelo Zempilo Engcono—Yidla Ngokuhlakanipha